ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော် မြစ်ကြီးနားသည် ဆစ်ခ်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာမြို့တော်ဖြစ်ပြီး မြို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာခဲ့သူများဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းရေပိုင်နက်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် မြန်မာကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ လေ့လာစူးစမ်းတင်ပြသွားဖို့ အစိုးရက ၎င်းတို့ကို တာဝန်ပေးထားတယ်လို့ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဒေဝူးဘတ်စ်ကားတွေကို ရန်ကုန်မြို့မှာ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသန်းတန် အဲဒီဖက်စပ်လုပ်ငန်းမှာ တောင်ကိုရီးယားက ဒေဝူးမော်တာလို့ လူတွေသိထားတဲ့ Zyle Daewoo Commercial Vehicle က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက Myanmar.
အာရှတစ်လွှားမှ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗီဒီယို ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ Viu ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာဈေးကွက် ၁၆ ခု၌ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ Viu ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်တဲ့ အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ ၄.
Episode 45: စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာလဲ တခြားရောဂါတွေလိုပါပဲ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာဟာ နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရောဂါတွေထဲက တစ်ခုလို့ ယုံကြည်သူတွေကို ဒို့အသံက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရွာသား ၁၀ ဦး သတ်ဖြတ်လိုက်ခဲ့မှုကို သတင်းလိုက်နေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်နှစ်ဦးကို တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီ ချလိုက်မှုဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်း အသိုက်အဝန်းကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်
အဲမန္တလေးလေကြောင်းလိုင်း ပြေးဆွဲမှု ရပ်နား
ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အဲမန္တလေးလေကြောင်းလိုင်း ပြေးဆွဲမှုအား ယာယီရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟု လေကြောင်းလိုင်းက ကြေညာလိုက်သည်။ သက်တမ်း ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းအား “လုပ်ငန်း ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းမည့် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးနောက် အနာဂတ် ဈေးကွက်အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့် အချိန်တွင် ပြန်လည်ပြေးဆွဲသွားမည်” ဟု စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က.